विद्या भण्डारी यो देशकी राष्ट्रपति हुन् कि मदन भण्डारीकी विधुवा ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ पुष २०७२, शनिबार १३:१४ |
काठमाडौँ । विवाह पञ्चमीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिरमा गएपछि मधेसी मोर्चाका केही उदण्ड कार्यकर्ताले जनकी मन्दिरमा विधवा प्रवेश गरेर अपवित्र भएको भन्दै गंगाजल छर्केपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । त्यसको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरुले धर्ना र विरोधका कार्यक्रम नै गरेका छन् ।
भ्रातृ संगठन अनेम संघले पनि त्यसको विरोध गरेको छ । महिला अधिकारकर्मी तथा एमाले नेतृ शान्ता चौधरीले पनि त्यसको विरोध गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेकी छिन् । उनले आन्दोलन गर्दा हातमा ढुंगा, लाठी र मुखमा जिब्रो छ भन्दैमा मनपरि गर्न र जथाभावी बोल्न पाईंदैन भन्दै विरोध गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भनाई जस्ताको तस्तैः
हे माता जानकी !
जीवनमा यति अपमानजनक कार्यको विरोधमा कहिल्यै धर्ना बस्न र विरोध गर्न नपरोस् भनी कामना गर्दछु । आज कति दुखपूर्ण विषयमा धर्ना बस्न परयो, आफैलाई लज्जाबोध भइरहेको छ । विवाह पञ्चमीमा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बम प्रहार गरियो, ढुंगामुडा प्रहार गरियो । यो निन्दनीय थियो, धार्मिक स्थलमा विरोध गर्नु, हिंसात्मक व्यवहार गर्नु कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसपछिका घृणित घटनाहरुले विश्व सामु नेपाली लज्जित हुनुपरेको छ ।
विवाहपञ्चमीको दिनको घटनालाई हामी नेपाली बिर्सन चाहन्थ्यौं । घटनाका जिम्मेवारहरुले त्यसमा क्षमा माग्लान् भन्ने विश्वाश थियो तर त्यसपछि सोही घटनालाई आधार बनाएर महिला माथि नै अपमान गर्ने काम गरियो । विधवा महिला मानिस नै होइनन् भन्ने ढंगले मधेस आन्दोलनका कतिपय पक्ष तथा कतिपय आन्दोलनकारीले व्यवहार गरेका छन् ।
विधवा महिलाको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाउने ढंगले अठारौं शदीको व्यवहार गरिएको छ । एक्काइसौं सदीको नेपालमा विधवा महिलाको अस्तित्वमा प्रश्न गर्नु लाजमर्दो घटना हो । यो घटनाका दोषीहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यो घटनाको जिम्मेवारी लिएर सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष माफी माग्नुपर्छ ।
राजनीतिक आन्दोलनको बहानामा समस्त महिलामाथि नै प्रहार गर्नु अपराध हो । यस्तो सामाजिक अपराधको बाटो आन्दोलनकारी दल र त्यसको नेतृत्व वर्गले त्याग्नुपर्छ । उनीहरुले सामाजिक मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । आन्दोलन गर्दा हातमा ढुंगालाठी र मुखमा जिब्रो छ भन्दैमा मनपरि गर्न र जथाभावी बोल्न पाईंदैन ।
नेपाली महिलाको अपमान, देशकै अपमान, मिथिला संस्कृतिको अपमान र माता जानकीको अपमान हुने यो घटनाको विरोधमा आज अनेमसंघले काठमाडौंमा गरेको धर्नामा सहभागी हुँदा असाध्यै दुख लाग्यो । जीवन धर्ना र आन्दोलनमै बिताइयो, यति घृणित कार्यको विरोधमा समेत धर्ना बस्न परयो । धर्ना अवधी भरि उदास भएँ म ।
Previousरौतहटमा झडप,११ प्रहरी घाइते
Nextपाँचौं न्याभ कप व्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट २०१५ सम्पन्न